Maamulka Puntland oo Amar Kusoo Rogay Shirkadaha Isgaarsiinta | Allbalcad Online
Home WARARKA Maamulka Puntland oo Amar Kusoo Rogay Shirkadaha Isgaarsiinta
Maamulka Puntland ayaa Shirkadaha Isgaarsiinta deegaanadooda ku amray in la hakiyo doollarka danabaysan ee teleefannada, isla markaasna lagu beddelo Shilinka Soomaaliga oo danabaysan.
Qoraal kasoo baxay Guddiga xalinta dhibaatada Suuqa Lacagta Puntland ayaa sheegay in weli aan si buuxda loo adeegsan lacagta Shillin Soomaaliga, uuna jiro qiimo koror alaabaha iyo adeegyada dadka danta yar ay ku iiban jireen lacagta Shillinka.
Amarkaan oo ka soo baxay Guddiga Xallinta Dhibaatada Sicir-bararka Puntland waxaa looga waxaa uu ujeedkiisu yahay in wax laga qabto sicir-bararka, sida ay Guddiga sheegeen.
Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Guddiga.
Next articleWeerar Gantaallo oo Lagu Qaaday Saldhig Ay Leeyihiin Ciidanka Mareykanka